Courtois oo si xiiso leh kaga hadlay El Clásico-da ugu horreysa kaddib bixitaankii Messi – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2021. Goolhayaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay kulanka El Clasico oo ay Axadda kula ciyaari doonaan Barcelona horyaalka La Liga.
Kulanka El Clásico ee Axadda ayaa noqon doonta tii ugu horreysay tan iyo markii uu ka tagay Lionel Messi kooxda Barcelona kaddib markii uu u dhaqaaqay naadiga Paris Saint-Germain bishii August ee la soo dhaafay.
Haddaba wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Thibaut Courtois kahor kulanka la wada sugayo ee El Clásico, wuxuuna yiri:
“Kulammada Clasico waxay ka mid yihiin kuwa loogu daawashada badan yahay adduunka, waana ku faraxsanahay in tarabuunka uu mar kale yeelan doono taageerayaal, tani waxay siineysaa El Clasico wax dheeraad ah.”
“Bixitaanka Messi? Waxaan jecelnahay inaan wajahno isaga, had iyo jeer waa wax weyn inaan awoodo inaad wajaho kuwa ugu fiican.”
“Waxaan xusuustaa ciyaar sannadkaygii ugu horreeyay, ma uusan ciyaarin, waxaana ku guuldarreysanay 5-1, ma doonayo inaan taas xusuusto, laakiin tani waa wax dhacay.”
“Barcelona waxay leedahay tayo, iyo ciyaartoy da’ayar ah sida Ansu Fati iyo Pedri, waxay noqon doontaa kulan weyn sababtoo ah waxay leeyihiin tayo badan.”